औंलाबाट मस्तिष्कबारेको ज्ञान - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
औंलाबाट मस्तिष्कबारेको ज्ञान
खासगरि ऋण लिँदा तमसुकमा ल्याप्चे लगाउने चलन छ । हाम्रा बाबु बराजेहरुले औंठाछापको प्रयोग गर्दै आएको युगौं भईसक्यो । ल्याप्चे लगाउने थिती अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । कुनै पनि व्यक्तिको औंठाछाप अर्को व्यक्तिसँग मेल खाँदैन भनेर नै ल्याप्चे लगाउन थालिएको होला पहिलेदेखि । बाबु बाजेले प्रयोग गर्दौ आएको यो औंठाछापको प्रयोग वैज्ञानिकरुपमा गर्दा यसैबाट कुनै पनि व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र र कुन क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिने वैज्ञानिक उपकरणको विकास भईसकेको छ भन्ने सुन्दा हाम्रा पुर्खाले प्रयोगमा ल्याएको औंठाछाप व्यावहारिकमात्र होईन, वैज्ञानिक पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । तर हामीले ल्याप्चे लगाउनका लागि प्रयोग गर्ने औंलाको टुप्पाले व्यक्तिको आचरण लगायतको अवस्था बताउँछ ।
औंलाको टुप्पोमा रहेको भागलाई स्क्यान गरेर त्यसबाट मस्तिष्कको बारे जानकारी दिने संयन्त्रको विकास विसिएल ग्लोबल नामक कम्पनीले विश्वका केहि देशहरुमा लागू गर्दै आएको छ । जसले बालबालिकाहरुको (ल्याप्चे) फिंगरप्रिन्टबाट उसको स्वभाव, चरित्र, बानी र कुन क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी मिल्ने बताईन्छ ।
कसरी थाहा हुन्छ फिंगरप्रिन्टबाट ?
बिसिएल (brain child learning) ग्लोबल नामक कम्पनीले यो प्रविधि सुरु गरेको हो । मलेशियामा रहेको यो कम्पनीले सन् २००० देखि सुरु गरेको हो । मानिसको हातमा हुने १० वटा औंलाको टुप्पोमा हुने प्रिन्टको माध्यमबाट दिमागको प्रयोगकाबारे जानकारी मिल्छ । मानिसको दिमागको दुई भाग हुन्छ । एउटा दाया र अर्को बायाँ । दायाँ हातको सम्बन्ध वायाँ दिमागसँग हुने र वायाँ हातको सम्बन्ध दायापट्टिको दिमागसँग हुने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर हातको औंलाको सहायताले दिमागको बारे कसरी जान्न सकिन्छ भन्ने कुराको तथ्य प्रो.डा. रुई विन लिन र प्रो. डा. हावर्ड गार्डनरले सुरु गरेका हुन् । यसले मानिसको भविष्यवाणी भन्दा पनि उसले काम गर्न सक्ने क्षेत्रका विषयमा र आचरणकाबारे बताउँछ ।
व्यक्तिभित्रको अन्तरनिहित क्षमतालाई पहिचान गर्ने यो पद्दतीलाई dermatoglyphics technology भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको क्षमतालाई कसरी र कुन क्षेत्रसँग उपयोग गर्दा बढी परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारीका साथै रुचि, क्षमता र विद्धताका विषयमा पनि जानकारी दिने माध्यमका रुपमा विसिएल ग्लोबलले यसलाई १५ भन्दा बढी देशहरुमा लागू गर्दै आएको छ । हातको औंलासँग दिमागको सम्बन्ध भएकाले पनि दिमागको अवस्थाबारे यसबाट जानकारी मिल्ने बताईन्छ । दिमागको ऐनाको रुपमा हातका औंलाहरु रहेकाले पनि मस्तिष्कको अवस्थाको बारेमा केहि तथ्य थाहा पाउन सकिने हुन्छ ।
यसलाई ज्योतिषशास्त्र हो की भन्नेहरु पनि छन् तर ज्योतिषशास्त्र भने यो नभएको विसिएल नेपालका सिईओ मोहन प्रसाद काफ्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘ज्योतिषशास्त्रले हस्तरेखाका आधार भविष्यबारेको जानकारी दिने गरिएको हुनसक्छ तर यसले औंलाको प्रिन्टका आधारमा मानिसको सम्भावना बताउने हो, भविष्य होईन ।’ यसको प्रयोग नेपालमा पनि विभिन्न विद्यालयहरुले गर्दै आएका छन् ।
ज्योतिषशास्त्रसँग मिल्छ ?
ज्योतिषशास्त्रमा पनि हस्तरेखा विज्ञान र ज्योतिष विज्ञान फरकफरक पाटाहरु हुन्छन् । हस्तरेखा विज्ञानले औंला, हातका रेखाको आकृति, नाडीमा हुने रेखाहरु, औंलामा हुने चक्र, औंलाको आकारका आधारमा मानिसको स्वभाव बताउँछ, । ज्योतिषी पण्डित दुर्गा प्रसाद शास्त्रीका अनुसार हस्तरेखाका आधारमा मानविय गुण दोष बताउँछ । उनी भन्छन्–‘कुनै एक तरिकाले यसलाई व्याख्या गर्न मिल्दैन, यसमा हातका औंलाभित्रको पनि आकार, रेखा तथा नाडीमा हुने तीन रेखाका आधारमा हस्तरेखा विज्ञानले मानिसका बारेमा बताउँछ ।’ तर ज्योतिष विज्ञानले भने खगोलशास्त्रको बारेमा जानकारी दिन्छ । ज्योतिषशास्त्रले तारा, नक्षत्रका गुणहरुको बारेमा बताउने ज्योतिषशास्त्री योगराज गाउँले बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘हस्तरेखा विज्ञानमा गणित छैन भने ज्योतिष विज्ञानले गणितिय आधारमा पृथ्वीका विषयमा जानकारी दिन्छ ।’
हस्तरेखा विज्ञानले हातको औंलाको विषयमा मात्र जानकारी दिने नभई हातमा रहेका औंला तथा हस्तरेखामा आधारित रहेर मानिसका ग्रह, रुचिजस्ता विषय बताउँछ । ज्योतिषी पं. शास्त्रीका अनुसार हातको औंलामा पनि फरकफरक तत्व रहन्छ । हस्तरेखा विज्ञानले बुढी औंलामा जलतत्व रहेको बताउँछ भने विज्ञानमा आधारित यो पद्दतीले बुढी औंलाले मस्तिष्कको अगाडिको भागको अवस्थाको बारेमा बताउँछ ।
यो औंलाको प्रिण्टको प्रयोग विभिन्न देशहरुमा आफ्नो किसिमले पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । एउटा व्यक्तिको औंलाको प्रिण्ट अर्को व्यक्तिसँग नमिल्ने त प्रमाणित नै भैसकेको छ । विश्वमा विभिन्न देशहरुले यसलाई फरकफरक तरिकाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अमेरीका र रुसले ओलम्पिक गेमका लागि खेलाडी चयन गर्दासमेत फिंगरप्रिन्टका आधारमा छनौट गर्थे । खेलाडीको अवस्था जान्नका लागि उनीहरुले यहि फिंगर प्रिण्टको सहारा लिन्थे भनिन्छ ।
हातको औंलामा हुने आकार गर्भमा रहेको १३ देखि १९ हप्तासम्म परिपक्व भैसक्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यो अवस्थामा नै कुनै पनि बालकको मानसिक अवस्थाको विकास सुक्ष्म ढंगले बनिसकेको हुन्छ । यो अवस्थामा गर्भवति महिलामा जुन किसिमको मनस्थितीको विकास हुन्छ बच्चामा पनि त्यहि किसिमको असर पर्न जान्छ । दोश्रो युद्धताका गर्भवति महिलाहरुबाट जन्मिएका बच्चाहरु जापानमा खाली दिमाग भएका जन्मिएको बताईन्छ, त्यो समयमा महिलाहरुले युद्धकाकारण केही सोच्न नसकेका कारण बच्चाहरु खाली दिमाग भएका जन्मिएको बताईयो । खाली मस्तिष्क भएका ती बच्चाहरु लामो समय बाँच्न त सकेनन् नै तीनीहरुको हातमा कुनै रेखाहरु नै नबनेकोसमेत पाईयो ।
हातको औंलामा हुने रेखा वा धर्सा नै मस्तिष्कको ऐना हो भनेर प्रो.डा. रुई विन लिन र प्रो. डा. हावर्ड गार्डनरले बताए । उनीहरुले औंलाको टुप्पोमा हुने धर्साको बनोटका आधारमा मस्तिष्कको जानकारी मिल्ने तथ्य बाहिर ल्याए । जुन अहिले विश्वका १५ भन्दा बढी मुलुकमा लागू गरिएको पाउन सकिन्छ । विसिएल ग्लोबलले यसको आधिकारिकता सन् २००७ मा प्राप्त गरेको छ । यसको ट्रेडमार्क दर्ता तथा आधिकारिता अमेरिकाले दिएको छ । मलेशियामा रहेका कार्यालयले फिंगरप्रिण्टको जानकारी प्रधान कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको प्रयोगशाला मलेशियमा मात्रै रहेको छ, सिष्टमका आधारमा उसले कुनै पनि व्यक्तिको रिपोर्ट फिंगरप्रिण्ट पठाएको ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
फिंगरप्रिण्ट दुरुपयोगको सम्भावना
एकजनाको पिंmगरप्रिण्ट अरुसँग नमिल्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । हातको औंलाको स्क्यान गरेर मलेशियामा पठाउँदा यो कति सुरक्षित र भरपर्दो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । बालबालिकामा रहेको क्षमता विस्तारमा यसले सहयोग पु¥याए ता पनि फिंगर पिन्टको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ पनि चासो हुन्छ । International Biometric Society नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फिंगर प्रिण्टको दुरुपयोग बारे अध्ययन गर्दछ जसले कुनै पनि व्यक्तिको फिंगरप्रिण्टको दुरुपयोग हुन दिँदैन । सन् १९४७ मा स्थापित यो संस्थाले व्यावसायिकता र वौद्धिकताका विषय बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ ।
नेपालमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न विभिन्न विद्यालयहरु अग्रसर छन् । खासगरी बालबालिकाका अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमता प्रष्फुटन गराउनका लागि यो अभ्यास प्रभावकारी हुँदै गएको छ । विभिन्न विद्यालयहरुले अहिले विद्यार्थीको क्षमता बढाउनका लागि यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् ।